ब्यानर विज्ञापन नेटवर्क - प्रदर्शन विज्ञापन किन्नुहोस्
लक्षित ब्यानर विज्ञापन खरीद गर्नुहोस्
प्रति सीपीएम $ ०.१० बाट मात्र उच्च गुणवत्ता ब्यानर विज्ञापन ट्राफिक पाउनुहोस्।
ब्यानर विज्ञापन के हो?
डिस्प्ले वा ब्यानर विज्ञापन डिजिटल विज्ञापनको सब भन्दा लोकप्रिय र परम्परागत विधि हो। यसले तपाईंलाई विभिन्न आकारका ब्यानरहरू मार्फत तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रमोट गर्ने संभावना प्रदान गर्दछ। हाम्रो प्लेटफर्मले सबै मानक IAB विज्ञापन आकारहरू, JPEG र PNG ढाँचाहरूमा समर्थन गर्दछ।
ब्यानर विज्ञापन अनलाइन विज्ञापनको एक प्रकार हो जुन विभिन्न प्रकारहरूमा आउँदछ, ब्यानर विज्ञापनहरू, धनी मिडिया र अधिक समावेश सहित। प्रदर्शन विज्ञापन छवि सन्देश, कुराकानी गर्न छविहरू, अडियो र भिडियो जस्ता तत्वहरूमा निर्भर गर्दछ।
ब्यानर विज्ञापनले उत्पाद वा सेवाको बिक्रीलाई बढावा दिदै ब्रान्ड जागरूकता र मान्यता सिर्जना गर्दछ।
COST PER सीपीएम
एक ब्यानर विज्ञापन को बढावा के गर्न सक्नुहुन्छ?
भिडियोहरू बढावा दिनुहोस्
भिडियो हेराई बढाउनुहोस्।
प्रदर्शन विज्ञापनले कसरी काम गर्दछ?
यो ब्यानर मार्फत अनलाइन विज्ञापन को एक प्रकार हो।
ब्यानर विज्ञापनलाई प्रदर्शन विज्ञापन पनि भनिन्छ (टेक्स्ट मात्र विज्ञापनको बिरूद्ध) ब्यानर विज्ञापनको दृश्य प्रकृतिको कारण। ब्यानर विज्ञापन को उद्देश्य एक ब्रान्ड को प्रमोट गर्नु हो। ब्यानर विज्ञापनले पाहुना वेबसाइटबाट विज्ञापनदाताको वेबसाइटमा वा कुनै खास ल्यान्डि to पृष्ठमा लैजान सक्छ। ब्यानर विज्ञापन अधिक रूपान्तरण प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो हो।